गुटबन्दी : परिवर्तनको बाधक ! – Chitwan Post
गुटबन्दी : परिवर्तनको बाधक !
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ‘सरकारका राम्रा कामलाई पनि बोलिएन, विरोधका शैलीमा मात्र आवाज आए’ भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको कुरा बजारमा निकै चर्चाको विषय बन्यो । तर, किन जनताको प्रतिनिधिका राम्रा कामलाई पनि प्रशंसा गरिँदैन त ? यसमा अचम्मको सार आउन सक्ला । वास्तवमा आजको नेपाली राजनीतिमा पार्टीका भजनमण्डली बन्नेको पनि त कमी छैन । प्रशंसा गर्ने संस्कारको जरो कहाँबाट र किन मक्किएको हो– अर्को खोजको विषयले हाम्रो धरातललाई सम्झाउँछ ।
अर्कातिर एकाथरी ओहोदा नभिरेर पनि पार्टीगत आस्था भएकाहरूको जमघटमा एकजना बूढा मान्छे बोल्छन् ः “खै, पञ्चायत ढालेँ भन्छन्, बहुदल ल्याएँ, राजा खेदाएँ भन्छन्, बहुमतको सरकार भयो अब त नबाझीकन विकासकै मात्र कुरो हुन्छ पनि भन्थे । अहँ ! आज सबै मान्छे नेताजस्ता । सत्तामा बस्नेमा गुटको रन्को गाउँमा पनि छ । हामी मिलेका छौँ भन्छन् । अवसरका भागबण्डामा पुरानो शैलीभन्दा पनि चर्को स्वरूपमा खेमापन्थीको चर्काचर्की छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको गुलाम बन्नुपर्ने बाध्यतामा लहसिन्छ । पहुँच भएसम्म हैकमवादी सोच उस्तै छ । प्रतिपक्षी पनि कमजोरी खोजेर लडाउने र भत्काउने बाहेक नयाँ शिराबाट बनाउने सपनै देख्दैन । कुर्सीको मोह हिजोकै जस्तो । अस्थिर विचार उस्तै । स्थानीय जनताले अधिकार त पाए, नीति पनि बने तर अब त काजमै बस्ने हुन् कि खै ?” अर्काले एकजना अलि विद्वान् देखिने मान्छे दूध चियाको कप टेबलबाट अलिक पर्तिर सार्दै भन्छन् – अहँ, यो बहुमतको सरकार भएर पनि स्पष्ट भिजनै भएन । माथिदेखि तलसम्म उसै गरी लडेकै छन् । युवा खाडीमा भासिएकै छन् । स्वरोजगारको अभाव र शिक्षितहरू बेरोजगार बनिरहेकै छन् ।”
चिया चौतारी फुर्सदका गफ हुन् । कतै रमाइला हुन्छन्, कतै मुक्कामुक्की गर्दै जुध्न पनि पछि पर्दैनन् । सबैलाई आफ्नै अहम्को चर्को होडबाजी छ । आजकल टेबलमा चियाको चुस्की स–साना जनसभा हुन्छन् । आँखा मिच्दै देशको बहस मच्चिन्छ । हो, आजभोलि यसो महिलाले पनि कान थाप्न थालेका छन् । समावेशी सम्बोधन नहुने पो हो कि भनी बीचमा अचार थप्दै गर्छन् । गफमा बहस चर्कियो– ‘एकताबाट निर्मित नवीन इतिहास कोरेको पार्टीले मखुन्डो मात्रै भिरेर सौदाबाजी त गर्दै छैन ?’ मलाई दर्शक÷स्रोता बनेर सुनिरहन मन लाग्यो । मजस्ता कान थाप्नेमा कोही समर्थक, कोही ठुटे नेताका पुच्छर त कोही आपूmभन्दा सानाका अघि गफ लडाएर चिया खाने दाउमा थिए– मैले मनन गरेँ । नेपालीहरूमा शङ्का र राम्रो कुरालाई नराम्रै बनाउने आदत पनि छँदै छ– सोचेँ ।
कुर्सीका लागि खेमाबन्दी
हुन त धेरैले भन्ने गर्छन्– नेपाली जनता भेडा हुन् । विश्लेषण र समर्थन गर्ने तरिका पनि अन्धो प्रवृत्तिको छ । चाकडीबाजको शैली र स्वार्थको आशा बोकेर खेमाबद्ध हुनेको लर्को विद्वान् भनिएका व्यक्तित्वमा पनि हुँदो रहेछ । अर्को अचम्मको कुरा आपूm समर्थकको जेजस्ता नराम्रा काम भए पनि, जति जघन्य र खराब कार्य गरे पनि सल्ट्याएर पानीमुनिको ओभानो हुने होड चल्दो रहेछ । कसैले भन्दै थिए– यो मखुन्डो भिरेको एकता हो । माओवादीले दशाँै वर्ष युद्ध ग¥यो । आज हेरौँ त जनताको त्याग र भोगेका वेदनामाथि प्रहार ? सत्य हो ! मान्छेमा बहस छन् तर खेमाबन्दीका छाँटले समाजको भाइचारा र विकास नै ध्वस्त छ । शिक्षालय नै खेमाबन्दी र गुटको चुक्लीमा चेपुवामा परेका छन् । पहिला पार्टीको समर्थन त्यसपछि पार्टीभित्रकै– खेमाको । कुरो गहिरो छ, निष्कर्षचाहिँ कुर्सीको । कोही हातको भाउ लगाउँदै बोल्दै थिए– ‘यो दुई दिने मखुन्डो भिरेर पुरानै शैलीमा एक भएका छन् । अवसरको पासो फालिनासाथ आपसमा तुष जन्माएर भिड्छन् । नेपालमा स्थायी सरकारले काम गर्ने जोग खासै देखिँदैन । खै, विश्वास छैन ।’ कोहीचाहिँ –‘यो सबै स्वार्थ र गोजी भर्ने खेल हो । जनताको आँखामा छारो हालेर स्वार्थ पूरा गर्ने प्रपञ्च हो’ आशङ्काकै भावमा दुःख मान्दै थिए ।
स्कुलै जान नपाएका र राजनीतिको ‘र’ नै नबुझेको हिमालको एउटा गरिब किसान या गोठालो भनौँ । जनता र नेता, नेता र सत्ताधारी नेतृत्व, प्रतिपक्षी र समकक्षी आपसमा विरोधाभास त हुन्छ । भाषण र व्यवहारमा भनिने र व्यावहारिक प्रयोजनका पाटामा मुलुकले परिवर्तनलाई कसरी बुझ्दै छ ? जबसम्म जनतामा विकासको प्रत्यक्ष अनुभव र निष्पक्ष न्यायको आभास हुँदैन तबसम्म जुनसुकै व्यवस्था सरकार आए पनि प्रशंसाभन्दा बढी विरोध हुन्छ नै ।
एउटा नवपुस्ता छ, जसले कोरियन भाषा पढ्दै छ । जापानिज, हिब्रु, अङ्ग्रेजी आदि सिकेर या त आइएलटीयस दिएर विदेशतिरै होमिने सपना बोकेको छ । अमेरिकाको डिभी भर्नेको लर्को, शिक्षा र पैसाको अपेक्षाको खज्मजिएको संसारमा समृद्धिका गफ हुन्छन् ? जनताको अवस्थालाई हेरेर सरकार त मान्छेको पेट भर्ने समस्यामा नै घोत्लिनुपर्दैन र ? कम आय हुनेको अवस्थाप्रति सोच्नुपर्ने कुरा पहिला कि अन्य महŒवाकाङ्क्षी योजना ? अब बहस् नहोस् पनि कसरी ? जापानले, अस्ट्रेलियाले, जर्मनले भिसा खुलायोभन्दा गर्व गर्ने संस्कारमा आजसम्म परिवर्तन हुन सकेन । माथिल्ला नेतृत्वनै खुलेआम रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रम बेचिने बाटो खुलेमा अपार उपलब्धि महसुस गर्छन् । यसमा पीडाभन्दा बढी त तिनले श्रम स्वीकृति नदिँदा नै हुन्छ ।
जनताको अभिमतबाट चुनिएको प्रतिनिधिले आपसी स्वार्थका लागि विचारलाई बाँड्दा आफ्नो हैसियतलाई भुल्न पाइन्छ र ? जनताले छिनछिनमा गुटबन्दी चलाउन भोट दिएका हुन् र ? कुनै पनि नेताले पार्टी परिवर्तन गर्नुपर्दा, खेमा बदल्दा आपूmलाई भोट दिने जनतासँग अनुमति लिनुपर्ने नैतिक आवश्यकता रहला कि नरहला ? कम्तिमा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने वा चित्त बुझ्दो कारण वा त काम गरेर देखाउन पनि त जान्नुपर्छ । काम गर्नभन्दा पनि ओहोदाका नाममा, भ्रष्ट चरित्रको नाम र मनोविज्ञानमा स–साना बखेडाभित्र उल्झिएर आजको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भौँतारिइरहेको देखिन्छ । नेता चुनाव लड्ने र जित्ने केही समयका लागि होइन उसको कार्यकाल र क्षमता रहेसम्मका लागि हो । तिनले गल्ति गर्नु, समृद्धिको पाइलामा भाँजो हाल्नु, यताउता गर्दा जनताको मन भाँड्नु भनेको वास्तवमा जनताको अभिमत माथिको अत्याचार हो । नेता जनताका लागि चुनिएको आस्थाको धरोहर हो । यद्यपि नेताले विगतमा ठूला–ठूला गल्ति गरेका हुन्छन्, जनताका लागि भन्दै जनताको मानव अधिकार, बाँच्ने अधिकारदेखि घरबारमात्र होइन हत्या नै गरेका हुन्छन् तर तिनीहरू कहिल्यै दोषी र हत्यारा हुँदैनन् । केवल त्यागी र समर्पित हुन्छन् । चाहे आफ्नो स्वार्थको राजनीतिमा होमिएका नै किन नहुन्– गरिब देशका जनताले खराब नेता हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि आशा बोकेर चाकडी गरिरहन्छन् ।
घरघरमा सिंहदरबार पुग्यो कि खाने मुखचाहिँ घरघरमा पुग्यो भन्नुपर्ने जटिलताले देशमा पीडा बढेको हो । ७७ जिल्लाका २९३ नगरपालिकाभित्र रहेका ४६० वटा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी निकायलाई मैले त जितेर आएको पार्टीका आडमा गुलामी गर्नुपर्छ भन्ने सोचले गाँज्यो र जताततै नातावाद चल्यो भने भ्रष्ट दरबार गाउँगाउँ पुग्यो भन्नुपर्ने हुन सक्छ । आज जुन देशमा मर्दाखेरि लास उठाउने मलामी पाउन छोडिएको छ, जुन देशमा राजनीति मात्रै ठूलो हो भन्ने शैली छ । जहाँ शिक्षा र शैक्षिक व्यक्तित्वको सम्मान हुँदैन, जहाँ विज्ञहरूले नेताको दैलो कुर्ने कुलीन परम्परालाई तोड्न सक्दैन भने परिवर्तन कसरी भयो ? सरकारी कामका लागि कर्मचारी आफन्तवादको खेमापन्थी चलाउँछन्, कर्मचारी नेताको पावर बोकेर कामचोर प्रवृत्तिमा हाबी बन्छ । क्षमता र योग्यताको उपहास भइरहन्छ भने सुशासन कहाँ कुन स्थानमा कसरी कायम रहन्छ ?
चाहेमा बदलिन समय लाग्दैन !
हिजो सन् १९७० ताका जापानलाई चामल निर्यात गर्ने, दोस्रो विश्वयुद्धपछि खाद्यान्न बाँढ्ने हैसियत बोकेको नेपाल आज २०२० सम्मको समयमा कति परजीवी बनेको छ ? आज हामी जापानभन्दा ५० औँ वर्षपछि रहेछौँ । आज यसको कारण अधोगति अधोमति भएका मुलुकमा अर्कालाई बझाएर, लडाएर आपूm उक्सिने प्रपञ्च मात्र रचिन्छ र राजनीति चलिरहन्छ । वास्तवमा दाता गरिब हुँदैन माग्नेलाई उन्नतिले छुँदैन भन्ने हुनुपथ्र्यो । हामीले आत्मनिर्भरता बिर्सिहाल्यौँ । अर्काको भाषा, अर्काको सामान, बोर्डिङ स्कुलमा अङ्ग्रेजी रटाउने, भान्साघरदेखि चर्पीसम्मका सामान आयातित अनि देशको उन्नति कसरी सम्भव हुन्छ ?
फ्रान्स सन् १९६७ ताका अहिलेको हाम्रो देशको जस्तै अन्योल र बेमेलको शैलीमा थियो । आज २०२० मा हामी त्यसबेलाको फ्रान्स जसरी ५३ वर्ष पछाडि रहेछौँ । दक्षिण कोरियातिर एउटा प्रोफेसरले बोल्दा, तिनका छेउमा पर्दा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति लगायतका व्यक्तित्वले समेत सादर सम्मान गर्छन् । हाम्रो देशका बौद्धिक वर्ग भनाउँदाहरूमा चाहिँ पदको लिप्सा बोकेर नेताको दैलो कुर्ने लाजमर्दो प्रवृत्ति प्रबल हाबी बनेको छ । यदि यही विसङ्गतिपूर्ण सोच रहिरहने हो भने यो मुलुकमा अर्को पृथक जालसाजीको राजनीतिक भड्खारोमा भासिने निश्चित छ । यहाँबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवाशक्तिको जमात बाहिरिनु भनेको एकदिन पृथक् प्रकृतिको नेतृत्व जन्मनु हो । यसको जिम्मेवार सत्तापक्षी र विपक्षी नेतृत्व बन्नुपर्छ । विकासकै कुरा गर्ने हो भने २००७ देखि आजसम्म झन्डै ७० वर्षको अन्तरालमा हाम्रो मुलुकले थुप्रै खाले सत्ताका प्रकृति पायो तर परिवर्तनलाई ठोस आभास गर्नै पाएन । कारण, हामीले स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको चरणलाई बोध गर्नै जानेनौँ । नीति बनायौँ, सुन्दर पनि हुन्छ तर कार्यान्वयन र प्राप्तिको विवरणसँग दूरदर्शी बन्नै जानेनौँ ।
पहिलाको नेपाल र अहिलेको नेपालको निराशालाई आशाले जोड्ने पहिलो आधार युवालाई अवसर र विकासको बाटोमा अग्रगामी छलाङ मार्नु नै हो । सम्भाव्यता खोतलेर युवाशक्तिका क्षमतालाई स्वदेशमै सम्मान गर्ने हो भने धेरैजसो समस्या हल हुन्छन् । विकासले फड्को मार्न हजारौँ वर्ष चाहिने पनि होइन । तर जब पद, पैसा र पावरको धाकले देशको शासन व्यवस्थामा प्रहार हुन्छ तब समस्या जन्मिरहन्छ, समाधान खोजिरहिन्छ र समय बितिरहन्छ तर परिवर्तनले मूर्तता पाउँदैन । त्यसैले आदर्शवादी व्यवहारको विकासवादी समृद्धिलाई ल्याउन सक्नुपर्छ । एउटै निःस्वार्थ विकासवादी योजनामा क्षमताको कदर गर्दै भाइचाराकै भावमा विकास गर्ने र भ्रष्टचारीलाई माक्र्सको भाषामा कुलीन र सम्भ्रान्त नभनी कठघरामा उभ्यानुपर्छ । हाम्रो नेपाली समाजको भाषामा ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन हुनु हुँदैन । विकासमा बाधक हुने समूहलाई सजाय दिन कन्जुस्याइँ नगर्ने शैलीमा अघि बढ्दा परिवर्तनका लागि युगौँसम्म कुरिरहनु नपर्ला । सबै समस्यासँग राजनीतिक कमजोरी नै जोडिन्छ तर विकासका क्षेत्रमा नवीन संरचना र व्यवस्थाको ज्ञानको अभाव हुनु पनि त हो ।
नयाँ व्यवस्था हो, समय लाग्न सक्ला यद्यपि साना मान्छेलाई पनि हेरौँ । गरिब तर क्षमता भएकादेखि उठाऔँ । सर्वहारा वर्ग र कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राख्ने नै हो भने ठूला विकासलाई मात्रै विकास हो भन्ने संस्कारलाई बदल्न सक्नुपर्छ । अब आर्थिक समताको सिद्धान्तमा सम्पन्नलाई दबाएर होइन तल्लालाई उकास्नुपर्छ । साधारण वर्गलाई चेतना र अवसर दिइनुपर्छ । हाम्रो देशले हाम्रै देशका सम्मपन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई रेल्वे सेवा, विद्युतीय विकासका योजना जस्ता क्षेत्रमा एकल वा साझेदारी दुवै प्रकृतिको कार्ययोजना दिने हो भने नेपालले ठूला देशका ठूला योजनामा लोभिनुपर्र्दैन । यसमा प्रभावकारी नीति र सम्झौता दुवै आवश्यक हुन्छ । कालोधन बटुल्नेलाई ‘हामीभित्रको हाम्रो मान्छे’ भन्ने विगतदेखिको राजनीतिक खेमाबन्दी नै स्वतन्त्र राजनीतिक प्रणालीको सबैभन्दा घातक विषय बनिरहेको छ । गुटबन्दी चलाउने नेताका कमजोरीलाई चिनेरै पनि जनताले केही स्वार्थका आशामा समर्थन गरिरहेका छन् । यो त एकतन्त्रीय शासनमा जसरी नै हजु¥याइँ गर्ने र चाकडीबाजकै शैलीसँग विकसित छ । यसर्थ आर्थिक समताको विषयलाई अन्य वर्ग विभाजनबाट होइन, जनताको आय र जायजेथोका आधारबाट मापन गरिनुपर्छ । विकास भन्ने कुरा प्रशंसा भन्दा बढी आभास हुने कुरा हो । परिवर्तन पनि भोगाइसँग गाँसिने विषय हो ।
जीवनमा वास्तविक चीजलाई अपनाउनुहोस् !